KMN: Gocha suukaneessaa Baatii 3 bilbilli addaan citee ture raawwatamee fi namoota lixa Wallaggaa irraa RIB tiin ajjefaman. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsKMN: Gocha suukaneessaa Baatii 3 bilbilli addaan citee ture raawwatamee fi namoota lixa Wallaggaa irraa RIB tiin ajjefaman.
1.Habtaamuu Raggaasaa Gammachuu
Aanaa Gimbii Baadiyaa
Ganda Biqiltuu Tokkummaa
Hojii Qote bulaa
Ajjeesanii sa’a 6 f reeffa dhorkatanii of bira tursanii booda Hospitaala Walii galaa Gimbiitti geessan.
Miilli bitaa cabee ture
Qadaaddiin jilba mirgaa dhangala’ee ture.
Lapheen isaa waraanamee ture.
Morma isaa micciiranii jiru.
Afaan isaan dhiigni ba’eera.
Guutummaan dhagna isaa reebichaan diimatee ture.
Kun gaafa 28/05/2012 raawwatame.
2.Abdii Mootii Dheeressaa fi
3. Ittaanaa Mootii Dheeressaa
Umurii 16 fi 19
Aanaa Laaloo Asaabii
Magaalaa Innaangoo ti.
Ijoollee kana lamaan haati ijoollummaatti irraa duute abbaatu guddise.
WBO tiif nyaata geessitu jedhanii ajjeesanii Magaalaa keessa reeffa isaanii gototan.
Abbaa fi Hawaasa dhaabanii reeffa isaanii irra adeeman.
Kun 12/5/2012 raawwatame.
4. Innahuu Beekumaa fi
5. Saadam Dhibberraa
Ijoollee kana osoo buna ciraa jiranii isin WBO barbaaduu as dhuftan jechuun ajjeesanii magaalaa keessa gototan.
Reeffa isaanii dhorkatanii guyyaa lama titiisni irra buufatee,Guyyaa sadaffaatti reeffa dhiisanii deemnaan hawaasni fuudhanii awwaalan.
6. Hambisaa Jaallataa Dinqaa umurii 20 Aanaa Hoomaa.
Ganda Siibaa Caroo,Mana barnootaa Sadarkaa lammafaa naannoo Tuuppii jedhamu jiraata ture.
Guyyaa sa’a 6 tti mana isaanii deemuun gad waamanii rasaasa lamaan ajjeesanii reeffa dhorkatan,Abbaa fi obboleessa isaa isa xiqqaatiin reeffa lafa irra harkisaa ittiin jedhan.
Kun gaafa 01/06/2012 raawwatame.
7. Ifaa Taammiruu jedhama.
Qeellam Wallaggaa ,Magaalaa Dambi Dolloo ganda 03 .
Barataa Univarsitii Wallaggaa Waggaa 2ffaa Muummee Veterinary Medicine barataa osoo jiruu maatii isaatiif bilbilee qarshii naaf ergaa jechuu waan rakkateef hiriyoota isaa irraa qarshii geejjibaa liqeeffatee galee, Naannoo Kolleejjii barsiisotaa Dambi Dolloo bakka Shonkoorri jiruu osoo shonkoora nyaatuu warri humna addaa Oromiyaa jedhaman maal dhabdee as dhuftee jedhan ,Ani barataa Wallaggaa Univarsitiiti maatii koo yaadeen gale amma immoo Shonkoora bitachuun dhufee jedhe,WBO yaaddee dhufte malee maatii maalii yaadde jechuun rasaasa lamaan ajjeesanii bira darban.
8. Mucaan tokko Aanaa Hoomaa ti fuudhuuf xalayaa miinzoliitti geeffataa jira ture.Akka naannoo sanaatti Miinzoliin Shanee jedhamu,Mucaan nama barate illee miti eessa deemta jennaan Shanee cidhaaf kadhachuun deemaa jedhe Waraanni sun shanee maal kadhattaa jedheen gaafa cidha koo kudha arfan har’aa akka na deggeraniif jennaan Shanee jarri WBO maqaa balleessuuf ittiin waamti aaranii rukutanii ajjeesan.
9.Biilaa naannoo Boobinee jedhamutti ijoollee maatii lagaa buna ciraa jiraniif osoo nyaata geessanii jiranii isin Shanee dha, Nyaata ummata irraa fudhattanii deebi’aa jirtu jechuun nyaata harkaa fuudhanii nyaatanii ijoollee ajjeesanii reeffa konkolaataa irra kaa’uun magaalaa Biilaa fi naanoo sana geessuun karaa irra gototan,reeffa isaaniitti kibritii qabsiisuun fuula isaanii guban,Reeffa isaanii guyyaa lama booda hawaasni kadhatee awwaale.”
Qeellam Wallaggaatti ajjeechaan raawwatamaa jiru bifa kanaan gaddisiisaa dha. PO keessaa nama 9tu ajjeefame 15 madaa’anii gara Bishooftuutti fudhatamaniiru. WRIB keessaa 11tu ajjeefame 117tu madaa’e. Kun torban kana keessa duwwaa tahe. Garuu isaan nama siivilii akkasiin ajjeesanii guban. Gocha sukkanneessaa dha.
Suuraalee dabalataa fi suukanneessoo tahan Seerri Facebook waan hin heyyamneef gabaasa addaa keenya tibbanaa keessatti suur-sagaleedhaan isiniif qindeessina.